७ बर्षकी सानी छोरीलाई भद्दा मेकअप गरिदिंदा ऐश्वर्यामाथि बर्षियो गाली !
मुम्बई, २९ फागुन । व्यवसायी तथा एसियाकै धनी मुकेश अम्बानीका छोरा आकाश अम्बानीको बिहेको रिशेप्सनमा उपस्थित भएका सेलिब्रेटीमध्ये यतिबेला चर्चामा छिन्, ऐश्वर्याकी ७ वर्षीया छोरी आराध्या । आराध्या उनका पिता अभिषेक बच्चन र आमा ऐश्वर्यासँग उक्त वैवाहिक समारोहमा उपस्थित भएकी थिइन् ।
आराध्याको अनुहारमा मेकअप स्पस्ट देखिएको थियो । आराध्याले पहिलो पटक क्यामेराको अगाडि रमाइला पोज दिइन् । तर, उनको पोज र मेकअप अहिले ट्रोल बनिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनका फ्यानहरुले छोरीको मेकअपको कारण ऐश्वर्यालाई गाली गरिरहेका छन् ।
यसै क्रममा एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘ऐश्वर्या, यति कम उमेरकी बच्चालाई कसले मेकअप गराइदिन्छ ? उनलाई उनको बचपनमा जिउन देउ ।’